अधिकांश मिडिया सत्ताधारी र धनाढ्याहरुको खेल मैदान जस्तै छन् | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / अधिकांश मिडिया सत्ताधारी र धनाढ्याहरुको खेल मैदान जस्तै छन्
अधिकांश मिडिया सत्ताधारी र धनाढ्याहरुको खेल मैदान जस्तै छन्
Posted by: युगबोध in विचार April 12, 2018	0 61 Views
पत्रकारिताको जीवन पनि भो गाइको हिसावले समाजको र व्यक्तिको नै एउटा जीवनगाथा हो जस्तो लाग्छ ।
२००७ सालअघि गो रखापत्रलाई छाडेरपत्रकारिता शून्यमा थियो  । गो रखापत्रले विविध विषय दिन खो जे पनि त्यहा“ राजनीतिक गन्ध आउनु हु“दै नथ्यो  । सात सालको क्रान्तिपछि ले ख्ने , बो ल्ने र संगठित हुने अधिकार त्यस बे लाको अन्तरिम संविधानबाट प्राप्त हुन सक्यो  । यति हु“दाहु“दै पनि शासकीय मनो बृत्ति भने विपक्षका कुरा न सहने मात्र है न अने क अत्तो थापे र जनपक्षीय पत्रकारहरुलाई दुःख दिइन्थ्यो  । त्यस् तो दुःख पाउने हरुमा मकै पर्व ले ख्ने सुव्वा कृष्णलाल अधिकारी र महाकवि दे वको टा पनि थिए । आजका नया“ पत्रकारहरुले ग्रीष्मबहादुर दे वको टाले ले खे को ने पाली छापाखाना र पत्रकारिताको इतिहास पढ्नै पनेर् पुस् तक हो त्यसै बाट सबै छर्ल¨ हुने नै छ ।
एउटा पत्रकारलाई पत्रकारिताको जीवन आफ्नो भो गाइको जीवनगाथा किन भन्न मन लाग्छ भने उहिले दे खिको हालखबर पढ्ने रुचि बढ्दै –बढ्दै रे डियो सुन्ने र टिभी हे नेर् गर्दागदैर् झा¨िदै –झा¨िदै यहा“सम्म आइ पुगिएछ । २००७ सालमा पहिलो पटक काठमाडौ ं पुग्दा गो रखापत्रबाहे क
कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्र, झण्डै डे ढ बित्ते चारपाने ‘नवयुग’ पत्रिका हात लाग्दा अचम्मै को प्रे रणादायी नया“ झलक महसुस भएको थियो  । पछि अध्ययनको क्रममा बनारसका गल्ली–गल्ली, पसल–पसलमा ठूला आकारका पत्रपत्रिका दे खिन्थे । ती मध्ये दै निक पत्रिका ‘आज’ ले मे रो ध्यान बढी खिंच्न सक्यो  । जो आजपर्यन्त बिर्सि नसकिनु छ ।
२०१० सालदे खि राजनीतिमा बढी के न्द्रित हुदा अखवारप्रति झन आकर्षण बढ्यो  । त्यसबे ला दाङबाट काठमाडौ ं समाचार पठाउन भन्दा लखनौ तिर समाचार पठाउन सजिलो लाग्थ्यो  । एउटा मजाको सम्झना अझै छ– भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्र जनयुगमा एउटा समाचार आयो – ने पालमा अभियुक्तहरुलाई के रकार गर्दा निकै सास् ती दिइन्छ । यहा“सम्म कि सिस् नो पानी समे त लगाएर अपराधमा सावित गराइन्छ । भारतीय पत्रकारलाई सिस् नो भन्ने वस् तु थाहा रहे नछ । उसले ले ख्यो ‘जलन दे ने वाली एक प्रकारकी घा“स ।’ यस् तो कुरा पढ्नमा पनि मजा आउने  ।
माक्र्सको जीवनी पढ्दा थाहा भयो  । उनले एउटा पत्रिका निकाल्दा जर्मनीमा तहल्का मच्चियो  । त्यसले गर्दा उनलाई दे श निकालाको सजाय दिइयो  । मे रो लाटो बुझाइमा तहल्का मचाइ दिए जसरी दो हो ¥याइ ते हे ¥याइ त्यो कुरा पढे ं । पार्टी संगठनमा लागे पछि ले निनको भनाइ उद्धरण गरिएको एउटा ले ख पढे ं– ‘अखवार भने को संगठनकर्ता, विचार प्रस् तो ता र अप्रत्यक्ष आन्दो लनकर्ता पनि हो  । यस्तै –यस्तै थियो  । तर त्यति बे ला न त्यति बौ द्धिक क्षमता न त आर्थिक सामथ्र्य न त त्यस् तो अवसर थियो  । तर पनि अखवारप्रतिको आकर्षण किन हो घट्दै घटे न ।
मलाई संस् कृत विद्याले पनि धे रै आड दियो  । एउटा सामान्य पाठकले पनि बुझ्ने उक्ति छ– ‘याहशी भावना यस् य सिद्धिर्भवति ताहशी’ अर्थात कल्पना या विचार जस् तो छ त्यस् तै सिद्धि प्राप्त हुन्छ । ममा पनि सबै त्यो ठ्याक्कै मिल्न आयो कि ? लामो हण्डर खाएपछि २०३३ सालदे खि पत्रकारितामा डुबे को डुब्यै भएछु । तर मे रो सीमालाई मै ले बुझे को छु । त्यसै ले के –के न गरे ं त भन्दै न, किन्तु तलतल छुटे को छै न । हिजै त हो जिउ ठीक नहु“दा नहु“दै पनि चारघण्टासम्म पत्रकारिता सम्बन्धी एउटा कार्यक्रममा अडिइरहे ं । लत लागे पछि यस् तो हु“दो रहे छ ।
क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनले आयो जना गरे को त्यो गो ष्ठीमा उनीहरुले आफूलाई खुलारुपमा कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव समूहको भातृ संगठन बताए । उनीहरुले रो ष प्रकट गरे – हाम्रो मुख थुन्न खो जिदै छ । खै , हाम्रो अभिव्यक्ति स् वतन्त्रता ? हाम्रा साथीहरु बो ले को भरमा जे लमा पर्छन् । यहा“ सत्ताधारीकै कब्जामा छ प्रे स स् वतन्त्रता । यस् तै यस् तै  । मै ले संसार सम्झे ं । कहीं पनि निरपे क्ष स् वतन्त्रता छै न । जहा“ पनि हदबन्दी छ । अमे रिकामा वाटरगे ट काण्डको भण्डाफो र गरे र, राष्ट्रपति निक्सनलाई सत्ताच्युतसम्म गनेर् स् वतन्त्रता छ । तर अमे रिकी सिष्टमलाई हा“क दिन सक्ने स् वतन्त्रता त्यहा“ पनि छै न ।
अमे रिकाको सन् २००१ मा संसारको व्यापारिक के न्द्रमा हमला हु“दा खरबौ को क्षति भयो  । हजारौ ं मान्छे मरे  । तत्कालीन राष्ट्रपतिले घो षणा गरे – यो आतंककारी हमलाको निन्दा नगनेर् हाम्रा शत्रु हुन् । कि हामीतिर आऊ कि उता जाऊ । यस् तो मा कसको आ“ट टीकाटिप्पणी गनेर् ? फलत ः संसारको पत्रकारिता संकुचनतिरै ढल्कियो  । अहिले मिडिया (पत्रकारिता) उद्यो गमा परिणत भएको छ । उद्यो गमा नाफा र घाटाबाहे क अरु कुरा बिरलै सो चिन्छ । संसारको पत्रकारिता यसै को चपे टामा परिसके को छ । मिडिया सत्ताधारीहरु र धनाढ्यहरुको खे ल मै दान जस् तै छ ।
यति हु“दाहु“दै पनि मिडियाकर्मीहरु खासगरी के ही पत्रकारहरु सत्यको उद्घाटन गर्न समर्थ भएका पनि दे खिन्छन् । युद्धमा पत्रकारहरु मारिएका खबरहरु बे ला मौ कामा सुनिन्छन् । जुनसुकै पक्षका भए पनि तिनले े रिस् क (खतरा) मो ले कै हुन्छन् । यसरी हे र्दा दुईथरिका दे खिन्छन् । जस् तो हो त्यस् तै ले ख्ने एकथरि । त्यसमा फूलबुट्टा भरे र आफ्नो पक्षको अनुकूल हुने गरी ले ख्ने अर्काथरि । पञ्चायतकालीन हाम्रै मुलुकको पत्रकारिता सम्झन्छु । सत्ताको भजनमण्डलीमा सामे ल अगुवा पत्रकारहरु त्यतिबे ला मालामाल हुन्थे भने आलो चना गनेर् हरुका अखवार से रिन्थे । पे ्रसमै ताल्चा लाग्थे र दण्डित, प्रताडित हुन्थे  ।
हिजो को गो ष्ठीमा मै ले पनि भन्नै प¥यो – ४६ सालपछि कुनै पत्रिका बन्द भएका छै नन् र पूर्वसेन्सर गरिएको पनि पाइएको छैन । विप्लवजीहरुले सा“च्चै क्रान्ति नै गर्न थाल्नुभयो भने आजको सत्ताले पक्कै सजिलो गरी खान दिनेछैन । प्रेस स्वतन्त्रतालाई हामी पत्रकारहरु र पाठक, श्रोता र दर्शक सबैले सापे क्षिक अर्थमा बुझ्नुपर्दछ । यसमा पनि विश्वव्यापी मान्यता के हो भने – पत्रकारिताको मूल तत्व एविसी नै हो  । (ब्अअगचबअथ, द्यबबिलअभ र ऋचबमष्दष्ष्तिथ) अर्थात यथार्थता, सन्तुलन र विश्वसनीयता । यी तिनै कुरा मान्ने पत्रकारहरुसित सहमति जनाउन सकिन्छ । तर जब विचार, दर्शन र सिद्धान्तका कुरा उठ्छन् त्यहा“ विभेद देखा पर्छ नै । जसलाई अस् वाभाविक भन्न पनि सकिन्न ।
ने पालमा राजतन्त्रको अध्याय समाप्त भयो  । एउटा निर्वाचित प्रक्रियामार्फत गणतान्त्रिक संविधान आएको त पक्का हो  । अहिले त अत्यधिक बहुमतको सरकार पनि छ । तर पनि कतिको चित्त बुझे को कहा“ छ र ? कानून मिचे र, बलमिच्याइ गरे र अराजक स् िथति आउने गरी गडबडी नगरे र शान्तिपूर्ण विरो ध गनेर् छुट त संविधानले दिएकै छ जस् तो लाग्छ । यस हदसम्म पत्रकारितामा स् वतन्त्रता वषौर् ंदे खिको तपाइ हामी सबै को अभीष्ट हो  । त्यो रे खाभन्दा पर जाने प्रे स स् वतन्त्रता म सो च्न पनि सक्दै न ।
विज्ञान र प्रविधिको विकास ने पाली मिडियामा पनि आइसके को छ । अब समाचार सुन्न पर्खन पदैर् न । उत्तर को रिया र दक्षिण को रियाबीच वार्ता, अमे रिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उत्तरको रियाली राष्ट्रपतिबीच भे टवार्ताको सम्भावना छिनछिनमै थाहा पाउन सकिन्छ । त्यति मात्र है न, अश्लील, नांगा भद्दा दृश्यहरु पनि मो बाइलमा हे र्न सकिन्छ । हामी कति संयमित हुने † र कति छाडा हुने पनि व्यक्ति–व्यक्तिमा निर्भर हुने कुरा भइसक्यो  । यस् तो मा प्रे स र पत्रकारितामा काम गनेर् हरुको जिम्मे वारी व्यक्तिगत संस् थागत दुबै रुपमा बढे को छ ।
आजको पत्रकारितामा दे खिने नकारात्मक प्रवृत्ति हे र्दा र दे ख्दा व्यक्तिगतरुपमा भन्ने हो भने पत्रकार हु भन्न पनि संको च लाग्छ, लज्जाबो ध हुन्छ । हाम्रो पत्रकारिता विकृतिको पहाडले थिचिएको जस् तो लाग्छ । पत्रकारिताको मूल्य, मान्यता र आदर्शमा खिया लाग्दै गएको छ । हाम्रो अवस् था नक्कल झक्कल धे रै छ घे च्राभरि मयल छ भने जस् तो भइरहे छ । यहा“भन्दा बढी भन्न शो भा दिदै न । हिन्दीमा एउटा भनाइ छ– ‘अपनी करनी उतरे पार’ जसले जस् तो गर्छ त्यसले त्यस् तै भो ग्छ । अब त यत्ति भन्ने बे ला आयो कि– कम्तिमा आफू बिग्रन नरो स् ।
Previous: घरेलु जडिबुटीबाट स्वास्थ्य उपचार
Next: शिक्षामा सुधारको साँचो